I-6 Friars House, iZiko leDolophu, i-Stafford | NguBell
Uya kuba nayo yonke imigangatho yokuqala ezimeleyo ukuze ukonwabele ngasese. Le ndlu yanamhlanje ixhamla kwigumbi lokuhlala elikhulu / ikhitshi, igumbi lokulala elikhulu kunye negumbi lokuhlambela. Kukho i-smart TV, ukufikelela simahla kwi-intanethi engenazingcingo kwaye yabucala kwindawo yokupaka ujikeleze izibonelelo ezinikezelwa lolu khetho lwangoku.
Ikhitshi - Ukuba ujonge ukulungiselela isidlo kuyo, iflethi ixhotyiswe ngokupheleleyo nge hob, oven, microwave, kettle, toaster, kitchenware kunye nempahla.
Igumbi lokuhlambela - Njengayo yonke indlu, isandula ukulungiswa, ineshawa, izinto zangasese zasimahla kunye neetawuli zibandakanya zonke ixabiso.
Igumbi lokulala: Eli gumbi lokulala linebhedi ephindwe kabini, indawo yokuxhoma iimpahla kunye nesifuba sokutsala ikunika indawo eninzi yokugcina izinto zakho. Ibhedi iya kwenziwa kusetyenziswa iilinen ezintsha ezimhlophe ezilungele ukufika kwakho.
Nangona unenzuzo yombindi wedolophu kumnyango wakho indlu ihlala kwindawo ehlala ubukhulu becala ukuqinisekisa ukuba ulala kamnandi ebusuku.
Ipropathi ibekwe kwindawo efanelekileyo kunye neziko ledolophu yaseStafford umgama nje wokuhamba umzuzu. Apha uya kufumana indawo entsha yokuthenga esecaleni komlambo, imo yobugcisa be-ODEON Luxe cinema kunye neebhari ezininzi zedolophu kunye neeresityu.
Ukuba ujonge ukulungiselela isidlo kuyo, le flethi ixhotyiswe ngokupheleleyo nge-hob, i-oveni, i-microwave, iketile, i-toaster, i-kitchenware kunye nempahla, kwaye ivenkile yasekhaya ikwimizuzwana engama-30 kuphela ngeenyawo.
Yonwabela indawo ephilileyo yedolophu yaseStafford kwaye isandula ukuvuselelwa ngokutsha ngokuthenga okukhulu, imivalo, indawo yokutyela yethiyetha kunye nesinema entsha ye-ODEON LUXE.
I-Stafford isentliziyweni ye-UK eneendlela ezigqwesileyo kunye nonxibelelwano lukaloliwe kwezinye iindawo ezininzi ezidumileyo.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$333